DHDUO (Dhaabbata Dimookraatawaa Uummata Oromoo) - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:25 7 Caamsaa 20214:25 7 Caamsaa 2021
Waggaa tokko keessatti aggaammiin haleellaa isarra gahe kun kan yeroo lammaffaaf ta'uus hima Lij Yaared.
...tti maxxanfame 8:47 9 Ebla 20218:47 9 Ebla 2021
Ergasiis hojjettoota Yunvarsiitii Jimmaa lama waliin hidhaa erga tureen booda yeroo lama galmeen himata adda addaa irratti banamee ture.
...tti maxxanfame 9:35 8 Ebla 20219:35 8 Ebla 2021
Godina Gujii Baha aanaa Liiban hoogganoota mootummaa dabalatee namoonni hedduun poolisiin to’atamu BBCn mirkaaneessee. Namoonni kunneen erga to’atamani osoo mana murtiitti hin dhiheessini amma guyyaa afur mana hidhaa jiraachuu maatiinsaani himan.
...tti maxxanfame 10:07 7 Ebla 202110:07 7 Ebla 2021
Yeroo rakkoo keessa jirru kanatti Oromoon biyya keessaafi alaa nu cinaa dhaabbachuu qaba, jechuun waamicha taasisan Bulchaa Godina Addaa Saba Oromoo Walloo.
...tti maxxanfame 10:11 5 Ebla 202110:11 5 Ebla 2021
Namoota ambulaansii keessaa baafamanii ajjeefamanirraa namni hafe maal hima?
Viidiyoo daran nama jeequufi miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa jiru kun wayita namoonni ambulaansii keessaa harkifamanii dhagaa fi meeshaalee qara qaban birootiin waraananii yoo ajjeesan mul'isa. Kanarratti wanta odeeffanne:
...tti maxxanfame 4:27 16 Bitooteessa 20214:27 16 Bitooteessa 2021
Filannoon biyyaalessaa jahaffaan naannoo Oromiyaatti maal fakkachuuf deema?
Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti morkattoota ciccimoo ta'u jedhamanii eeggamaa turan lama, Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)fi Koongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n "filannicha keessaa dhiibamneerra," jechuun filannicharratti akka hin hirmaanne labsuun saanii ni yaadatama. Haata'u malee filannoon biyyaalessaa marsaa jahaffaa gaggeeffamuuf yeroo ji'a sadi hin guunnetu hafe.
...tti maxxanfame 7:50 25 Guraandhala 20217:50 25 Guraandhala 2021
Ibsa isaa kanaan Komishinichi, "Naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun yaaddessaa ta'era," jechuun ibse.
...tti maxxanfame 10:22 24 Guraandhala 202110:22 24 Guraandhala 2021
Walitti-qabduun Boordii Filannoo Biyyaalessaa Aadde Birtukaan Miidhagsaa waa'ee hidhamuu aanga'oota Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisee 'qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin' dubbachaa jira jette.
...tti maxxanfame 5:37 22 Onkololeessa 20205:37 22 Onkololeessa 2020
'Jeequmsa uumameen sodaan mul’atus, Oromiyaatti invastimantiin dabalaa jira'
Dhaabbilee Investimentii yeroo jeequmsaa miidhamaniif beenyaan mootummaan kanfalu hin jiru jedhe Koomishiiniin Investimentii Oromiyaa.
...tti maxxanfame 11:07 20 Onkololeessa 202011:07 20 Onkololeessa 2020
Maatiin Obbo Baqalaa Garbaa dhukkubbii ijasaaniif yaala dhabuun yaaddoo nutti umeera yoo jedhan, Abbaan Alangaa Waliigala Federeaalaa ammoo namni shakkamee harka mootummaa jiruu yoo dhukkubsatuutti mana yaalaa geeffamee yaalamuuf mirga qabaachuufi motummaanis kana raawwachisuuf dirqama qabaachu BBC'tti himan.
Page 1 Keessaa 10